बङ्गालको जलवाष्पयुक्त हावाले मौसममा अदलबदल
काठमाडौँ, २३ जेठ । बङ्गालको खाडीबाट आएको जलवाष्पयुक्त हावा र स्थानीय वायुको प्रभावका कारण बदली र वर्षा भैरहेको छ ।
उक्त वायुको प्रभावले आज देशभर बदली हुनाका साथै पूर्वी, मध्य र पश्चिम भेगमा वर्षात् भएको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ । दुवै वायुको सम्मिश्रणले पानी परेको र यो प्रणाली केही दिन जारी रहने मौसमविद् शान्ति कँडेलले जानकारी दिनुभयो ।
अर्का मौसमविद् वरुण पौडेलले प्रि–मनसुनको पूर्वसन्ध्यामा मौसममा केही खराबी आएकाले मनसुन ढिलो हुने बताउनुभयो । नेपालमा सामान्यतः जुन १० देखि मनसुन सुरु हुन्छ । यस पटक बङ्गालको खाडीमा न्यूनचापीय रेखा सक्रिय नभएकाले मनसुन केही ढिलो हुने मौसमविद् पौडेलले बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार देशको पश्चिमी भेगमा पश्चिमी वायुको प्रभाव, मध्य भेगमा न्यूनचापीय रेखाको विकास र पूर्वी भेगमा बङ्गालको खाडीबाट आएको जलवाष्पयुक्त हावाको प्रभावका कारण मौसममा खराबी आएको र अहिले मध्य र पूर्वी भेगका केही स्थानमा वर्षात् भइरहेको छ ।
साँझपख काठमाडौँ उपत्यकासहित देशका अधिकांश भेगमा वर्षात् हुने बताइएको छ । महाशाखाको पछिल्लो विवरण अनुसार सबैभन्दा बढी ओखलढुङ्गामा १९.० र सबैभन्दा कम पोखरामा १.० मिमी वर्षात् भएको छ । काठमाडौँ उपत्यकामा बिहान हल्का वर्षात् भएको थियो । आज काठमाडौँ उपत्यकाको न्यूनतम तापक्रम १९.५ र अधिकतम तापक्रम २८.८ डिग्री सेल्सियस रहेको महाशाखाले जनाएको छ । रासस
विश्वकै सबैभन्दा अग्लो पुल खुल्ला
थुनेलो रोग निको पार्ने औषधि पहिचान
लाइसेन्सको फाराम आजदेखि अनलाइनबाटै
डाईनासोरको कङ्काल भेटिएको दाबी
माछा राम्रो कि मासु ?
मेथीको फाइदै फाइदा
घर बनाउनु अगाडी जमिनको शल्य कृया आवश्यक
बायोग्यास उत्पादनका लागि मेसिन ल्याइँदै
सहज आवागमनका लागि ट्राफिक मोबाइल एप्स
Mobile Tracking' system for promoting legal transaction of mobile phones
चितवनका स्थानीय निकायका गतिवधि अब मोबाइलमै
टवीटरले करिब सबा लाख एकाउन्ट बन्द गरे
‘वाइफाइ’ भन्दा सय गुणा तीब्र ‘लाइफाइ’ कसरी चल्छ ?
टेलिकमले नयाँ डाटा प्याकेज ल्यायो
जनकपुरमा अक्सिजन ग्यासको अभाव